Ukufunda ngomatshini: Iyintoni kwaye isetyenziselwa ntoni kwi-Android | I-Androidsis
Yintoni iMatshini yokufunda kwaye yenzelwe ntoni?
Ubukrelekrele bokwenza into yenye yezona zinto ziphambili namhlanje kwi-Android. Ngaphezulu nangakumbi iiprosesa ziqala ukusebenzisa ii-neural motors okanye iiprocessor ezabela izixhobo kwimisebenzi ye-AI. Into ebesikwazile ukuyibona kwezinye zeeprosesa eziphezulu ezifike kwimarike kutsha nje, ezinje Exynos 9820 o Kirin 980. Ngokudibana nobukrelekrele bokuzenzela sifumana elinye igama elinguMatshini wokuFunda.
Ngokuqhelekileyo simamela ubukrelekrele bokuzenzela kunye nokuFunda komatshini ngesandla. Nangona abasebenzisi abaninzi kwi-Android bengazi ngokwenene ukuba yintoni okanye bayintoni. Okulandelayo siza kukuxelela ngakumbi ngayo, ukuze ucace malunga noku, ukuba zixhaphake kangakanani namhlanje.
Inyani yile yokuba zizigama ezimbini ezahlukeneyo, njengoko unokuthelekelela, nangona zisondele kakhulu. Kukho elinye igama eliqala ukufumana ubukho obuninzi kwindawo yentengiso, ezinje ngokuFunda okunzulu. Apha ngezantsi siza kukuxelela ngakumbi malunga nala magama, ukuze ukwazi ukuqonda ukuba nganye yazo imele ntoni na.
1 Ingqondo yolwazi
2 U kufunda
3 Yintoni ubukrelekrele bokufakelwa obusetyenziselwa i-Android?
Singabhekisa kwimisebenzi edla ngokufuna okanye kungafuna ukuba ubukrelekrele bomntu benziwe. Umbono wobukrelekrele bokufakelwa uvela kwii-60s, kwihlabathi lekhompyuter. Ngelo xesha, eli gama lenzelwa ukusombulula imisebenzi enokwenziwa ngabantu ngendlela elula kakhulu, kodwa oko kungumceli mngeni kwiikhompyuter. Le yimvelaphi yayo.
Ngaphakathi kobukrelekrele bokuzenzela sifumana imisebenzi ethile. Phakathi kwazo sinokufumana ezinye indlela yokuqonda izinto, into esiyibonayo xa sisebenzisa ikhamera kwiifowuni ezine-AI, ukuba umatshini unokunxibelelana nathi ngamazwi, njengabancedisi, njl. Imisebenzi esiyibonayo ngakumbi nangakumbi rhoqo.
Kwindawo yesibini sifumana ukuFunda koMatshini. Njengoko igama layo libonisa, Imalunga nokufunda ngomatshini. Yinxalenye ye-AI ezinikele ekunikeni impendulo okanye isisombululo kwingxaki okanye kumbuzo oye waqulunqwa. Kule meko, impendulo iya kunikwa ngaphandle kwendlela esele yenziwe. Inkqubo iyakufunda ngokwayo ukunika le mpendulo okanye ukusombulula le ngxaki.
Le yinto eya kuyenza ngokusekwe kumava angaphambili okhe wanayo kule mi sebenzi. Siyabona ke ukuba ukuFunda koMatshini kusekwe kwiziseko zokuziphatha kwabantu, zokufunda kumava. Ukongeza ekunikezeleni inkuthazo elungileyo nembi, ngohlobo lwezohlwayo okanye imbuyekezo.
Ukuziphatha komntu okunikezelweyo kuye kuthande ukuziphinda ngokuhamba kwexesha. Ngelixa ezo ndlela zokuziphatha zohlwaywa, ziyancitshiswa kude kube kwiimeko ezininzi zicinyiwe. Umzekelo olungileyo wesicelo sayo kwiifowuni kukuba kukuqinisekisa ukuba lo msebenzi wenziwe ngokuchanekileyo, kufuneka sicinezele iqhosha okanye sisilayishe umnwe.
Umzekelo, ukuba ifowuni yakho ye-Android iyaziwa ebusweni, xa uyivula kwaye ubona ukuba ifowuni iyasazi, kufuneka sityibilike umnwe wethu. Olu luphawu lokuba ifowuni iwenzile umsebenzi wayo ngokuchanekileyo. Ngakolunye uhlangothi, xa sibona ukuba isixhobo asisibonanga, kufuneka faka iqhosha lokuvula ngokufanayo. Kule meko, kucacisiwe ukuba khange kwenziwe kakuhle, ke ngokuzayo akufuneki usilele kuloo meko.
Yintoni ubukrelekrele bokufakelwa obusetyenziselwa i-Android?
Kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukufumana ubukrelekrele bokuzenzela, kwaye ke ngoFundo loMatshini kwiifowuni ze-Android. Sele iyindawo eqhelekileyo kwintengiso yefowuni. Kwaye ayisiyonto emelwe ukusothusa, kuba isinika uthotho lwemisebenzi eyenza ibaluleke kakhulu.
Ukuqwalaselwa kobuso ngokubanzi kunye nokuchongwa kwembonakalo
Uguqulelo lolwimi oluzenzekelayo
Ukuphuculwa kwekhamera (imisebenzi eyongezelelweyo njengokuqonda izinto)
Iintengiso ezenzelwe wena
Iingcebiso zomxholo ngokusekwe kukhetho lwakho okanye imbali
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni iMatshini yokufunda kwaye yenzelwe ntoni?
Amaqonga, i-physics yento kunye nezibane ze-neon kwi-Spectrum Break
IFransi ibhaqa iifowuni ezi-8 ezikhutshwa yimitha eninzi